Mekọrịta Microstation na Google Earth - Geofumadas
Eprel, 2014 cadastre, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Google Earth abụrụla ngwa ọrụ a na-apụghị izere ezere na usoro nhazi anyị ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ nwere njedebe ya na mkpụrụ nke ịdị nro, a na-ekwu okwu kwa ụbọchị ọtụtụ nsogbu, site na ngwa a anyị ji ụgwọ na geolocation na igodo na maapụ ka ama ama taa ... ya mere anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ chọrọ maka ọrụ ọkachamara.
N'ihi nke a, site na 8.9 version nke Microstation, Bentley ejirila arụmọrụ nke gụnyere ngwaọrụ ndị bụ isi iji mekọrịta echiche nke map ahụ na nchịkwa Google Earth.
Ka anyị lee otú o si arụ ọrụ:
1. Nkọwapụta na usoro ntinye akwụkwọ ga-ekenye faịlụ ahụ.
Microstartion na-enye ohere iji asụsụ ala mepụta ma dezie faịlụ na usoro DWG, DGN na DXF; agbanyeghị ndị a enweghị ikike mgbe usoro GIS kpọrọ ha. Ma ọ dịkarịa ala ọ bụghị n'ụkpụrụ a ghọtara maka faịlụ CAD, n'agbanyeghị na mmemme ahụ nwere georeferencing.
Iji kenye georeference nke faịlụ CAD na Google Earth, a na-eme ya:
Ngwa / Geospatial / Geospatial.
N'ime ogwe a, enwere akara ngosi akara ngosi «Họrọ usoro nhazi ihu ala«. Site na ebe a ka anyị họrọ, na nke a, sistemu atumatu: World UTM, datum: WGS84 na mpaghara ahụ, nke dị na anyị bụ mpaghara ugwu 16.
Ka m wee ghara ịkpọ nhazi a oge ọ bụla achọrọ ya, enwere m ike ịpị aka nri ma tinye ya na ọkacha mmasị. Nke a bụ otu o si apụta n’elu, na folda ọkacha mmasị.
Site na nke a, DGN nwere usoro nhazi na nhazi.
Ziga faịlụ na Google Earth.
Emere ihe a na bọtịnụ «Mbupụ Google Earth (KML) Njikwa. Nke a dị ezigbo mma, sistemụ ahụ na-ajụ maka aha na ebe ị ga-echekwa, ọ na-ewetakwa Google Earth na-akpaghị aka na ihe ahụ; ọ bụrụ na ị jiri anya nke uche hụ ebe ahụ, ọ na-ekpughe n'echeghị anya. Ọ bụrụ na echekwara ya dị ka kml, ọ ga-emepụta otu faịlụ nke vector niile, ọ bụrụ na echekwara ya dị ka kmz ọ ga-emepụta folda maka ọkwa ọ bụla; na nke ọ bụla ọ ga-echekwa ihe atụ ahụ, ọ ga-ebupụkwa ihe 3D.
Ọ bụrụ na ị gbanwee, naanị anyị na-ahọrọ ịkwaga ọzọ, na nyocha Google Earth ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji dochie faịlụ a na-elele.
Mekọrịta echiche ahụ na Google Earth
Ugbu a na-abịa nke kacha mma. Nwere ike si Microstation, gwa Google ka ịmekọrịta ngosipụta ahụ n'echiche anyị nwere na Microstation. Ọmarịcha.
Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike iche ihu, na elele Microstation ga-ejikọta na ihe Google Earth gosipụtara.
Ọ bụghị ihe ọjọọ, na-atụle na n'ọtụtụ ọnọdụ ịnweghị onyinyo nke ebe ị na - arụ ọrụ, ma ọ bụ na ịchọrọ iji Google Earth ozi metụtara foto site n'afọ ndị gara aga.
Previous Post«Previous 5 Aro maka nchekwa nke akụrụngwa nyocha
Next Post Kpọọ ọrụ WMS site na MicrostationNext »